यी १३ दिन सपनाजस्तै भएर बिते । कति पटक तिमीलाई फोन गर्न मोवाइलमा नम्बर हाने...।
भाइ प्रकाश, तिम्राे सम्झनामा दुर्इ शब्द…
भाइ प्रकाश, आज तिमीले हामीलाई छोडेर गएको पनि १३ दिन भइसक्यो । यी १३ दिन सपनाजस्तै भएर बिते । कति पटक तिमीलाई फोन गर्न मोवाइलमा नम्बर हाने…।
हामीलाई यस्तो छटपटी भएको छ भने, हाम्रा अभिभावक क. प्रचण्ड र क. सितामाथि कस्तो भएको होला । यो बज्रपात र पार्टीले झेलेयो क्षतिले सम्हालिन गार्हो भएको छ । तर, पनि धैर्यधारण गर्नु बाहेक अरु उपाए नहुने रैछ ।
म चितवनको यात्राको लागि रात भरी गाडीमा थिए, ज्वरो ले छोडेकै थिएन । आदरणीय कमरेड सिता र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डमाथि परेको दुख र हामी सबैले भोग्नु परेको क्षतिको कुनै मल्लह्म र पूर्ति थिएन ।
भाइको आकस्मिक निधनले धेरै दिनसम्म हामीबीच स्तब्धता छाईरहेको थियो । चुनावको चटारो टरेको थिएन । त्यहीपनि एकपटक मात्र भएपनि आदरणीय अध्यक्ष कमरेड र सिता कमरेडलाई देख्नपाए मन सान्त हुन्थ्यो कि भनेर हतारिएकि थिए । छर्लंग उज्यालो पनि भयो , म चितवन पुगे । भाइ तिम्रो माटो छुदा पनि मन भिन्नै भयो ।
चारैतिर भाइको प्रतिबिम्वले फेरी एक पटक घेरिए । कानमा दिदि सलाम ! भनेको आवाज घरी घरी आईरह्यो । सधै आउने जीवनका आफ्ठ्याहरु म भाइ तिमीसँगै सेयर हुन्थ्यो । तिम्राे अभावले बाँकी जीवन झन जटिल जस्तो लाग्न थालेको छ । सारै एक्लो जस्तो महसुस भएको छ भाइ ।
किन कि अध्यक्षको समय छोटो हुन्थ्यो, त्यसैले उहाँको अमूल्य समय व्यक्तिगत कुरा दर्साएर नबितोस् भन्ने लाग्थ्यो । बाँकी सबै कुरा प्रकाशसँगै हुन्थ्यो किनकि प्रकाशसँग बताएका कुरा गोप्यतामा पनि रहन्थ्ये र सुरक्षित पनि । उमेर सानो भएपनि सबैको लागि अभिभावक नै थियौं भाइ प्रकाश ।
पन्जावमा देखेको त्यो चन्चले बहादुर केटालाई अहिले पनि बेतावका साथ खोजिरहन्छ मन । रोल्पाका गाउँमा बन्दुक बोकेर भोकै प्यासै देश र जनताको लागि कुद्ने सहासी जनसेनालाई खोजिरहन्छन् यी आँखाहरु । बाबाको साथी , आमाको प्यारो नानी, दिदिहरुको अभिभावक, योध्दाहरुको प्यारो कमरेड, उसको अभावमा हामी कसरी छटपटिरहेछौं ।
‘उसको इच्छा अहिले वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायर जितोस् भन्ने थियो । उसको इच्छा पुरा गर है ।’
अर्धचेत अवस्थामा आमा (सीता) उठेर लरबराउँदै भनुभयो ‘उसको इच्छा अहिले वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायर जितोस् भन्ने थियो । उसको इच्छा पुरा गर है ।’ बाबा (प्रचण्ड) ले ‘अब हामी लाखौं छोरा छोरीहरुको लागि बाँच्नु पर्छ’ भनेर चुनावी दौडमा कुद्दै हुनु हुन्छ । उहाँलाई रुने फुर्सद पनि छैन । दिनमा ७, ८ वटा कार्यक्रम अनि राती अबेरसम्मको भेटघाट । याे सबै देखेपछि भरिएका आँशु अाँखामै बिलाए । खिन्न भएकाे मनमा उर्जा भरियाे ।
भाइ तिम्रो बारेमा जति लेखे पनि र जति बोले पनि त्यो कम नै हुन्छ । अब तिम्रा सपना पुरा गर्ने लक्षमा, त्यही महान बाटोमा निरन्तर हिडिरहने प्रतिबध्दता नै तिमीप्रतिको उत्तम श्रृदान्जली हो । भाइ, त्यही प्रण गरेर परिवारमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै म बाटो लागे । म त फर्किए तर, मन उतै रह्यो, तिमीलार्इ नै खाजिरह्याे । भाइ प्रकाश तिम्रो सम्झनामा मेरा दुईशब्द ।